Malaza ny fomba Wabi-Sabi, toy izany koa ny micro-simenitra!
Home / Interior design / Malaza ny fomba Wabi-Sabi, toy izany koa ny micro-simenitra!
2021 / 08 / 07 FisokajianaInterior design 6595 0
Original Streamline Alliance Design Alliance
Ny fomban'ny wabi-sabi minimalist dia nalaza be tamin'ity taona ity. Mamaly ny fon'ny olona izany. Minimalism sy wabi-sabi no fisehoan'ny fikatsahana samirery sy famotsorana ny fangatahana. Ary ny micro-simenitra ho fitaovana vaovao dia azo ampiasaina amin'ny lafiny rehetra amin'ny habakabaka. Tsotra sy voajanahary ny fombany nefa feno firafitra. Izy io dia lalao mety indrindra amin'ny fanao Wabi-sabi minimalist malaza. Lasa netflix voajanahary izy ireo. Androany isika dia hianatra simenitra bitika.
Momba ny micro-simenitra dia azo dinihina avy amin'ireto lafiny manaraka ireto.
Inona ny microcement ary inona ny haben'ny fampiharana?
Inona avy ireo toetra mampiavaka ny microcement ary ahoana ny fahombiazan'ny loko?
Inona ny fizotry ny fananganana microcement?
Vidiny sy mpamokatra Microcement
Inona no atao hoe microcement?
Microcement dia karazana haingon-trano vaovao. Ireo singa fototra ao aminy: simenitra, resina miorina amin'ny rano, additives, pigment mineraly, sns. Azonao atao ny mahatakatra azy ho toy ny karazana simenitra manana haingon-trano matanjaka kokoa. Maroloko, azo nozairina ary mety manify na matevina. Izy io koa dia afaka mamorona firafitra isan-karazany, toy ny tany diatomaceous, nefa mahery noho izy io. Azo ampiharina amin'ny rindrina, tafo sy gorodona izy io, noho izany dia nahazo fanekena malalaka hatramin'ny nanolorana azy.
Teknolojia telo samy hafa izay azo noforonina tamin'ny alàlan'ny microcement
Asan'ny Zhoushan Yunhaiyuan Guan Tianchi!
Inona ny haben'ny fampiharana?
Microcement dia be mpampiasa. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny saika ny toerana rehetra sy ny fomba rehetra.
Haingo trano vaovao
Na ny fanaovana gorodona mirindra, na ny rindrina sy ny famolavolana gorodona tsy misy sisin-dàlana, ao anatin'izany ny famolavolana rindrina ao an-dakozia sy fandroana, ary koa ny faritra mando sy ny valindrihana ao amin'ny fandroana, azo ampiasaina izy io.
Fanarenana trano taloha
Microcement ho haingon-trano amboniny dia manana vokany tena matanjaka. Avy eo isika dia afaka mampiasa microcement handrakofana ny tampon'ny tile na marbra mivantana rehefa manavao ny trano taloha isika. Io dia afaka mampihena be ny vanim-potoana fananganana sy ny vidin'ny asa.
Hotely sy B & B
Ny microcement dia ampiharina amin'ny trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny, ary koa ny toerana ara-barotra sasany. Manana tombony miavaka izy io. Mety amin'ny fananganana faritra midadasika, fotoana fohy ary tombony hafa.
Sehatra ho an'ny daholobe
Koa satria ny microcement dia manana ny toetran'ny anti-mould sy ny rano-proof, dia azo ampiasaina amin'ny toeram-pivarotana fampisehoana toerana, birao, hopitaly, tranomboky ary toeram-bahoaka hafa.
Sary hosodoko tarehy
Ny microcement dia azo ampiharina mivantana amin'ny façade trano, fanavaozana ary hosodoko ihany koa. Ny toetrany tsy tantera-drano sy mora diovina dia mahatonga azy io ho mendrika ampiasaina amin'ny fananganana endrika.
Fanamboarana ny triatra amin'ny gorodona
Microcement dia manana fampiharana lehibe hafa ary faritra manandanja indrindra amin'ny orinasantsika any Eropa izao: ny fanamboarana ny gorodona simenitra nentim-paharazana. Ny fanoherana ny abrasion sy ny adsorption tsara amin'ny microcement dia hiantoka fa tsy ho triatra indray ny gorodona nohamboarina.
Inona avy ireo toetra mampiavaka ny microcement?
Microcement dia manana tombony betsaka. Raha ampitahaina amin'ny fampitovizan-tena dia mateza kokoa izy ary tsy mahazaka akanjo. Ary tsy natao ho an'ny rindrina ihany fa ho an'ny tafo sy gorodona ihany koa. Manana ireto tombony manaraka ireto izy io.
1, fampisehoana tsy tantera-drano sy tsara afo
Ny simenitra mikraoba dia maharitra amin'ny alàlan'ny rano. Ny simenitra mikraoba nentim-paharazana dia tsy tantera-drano, noho izany dia mila mampiasa tombo-kase ianao ho famaranana. Izy io dia afaka manome vokany tsy tantera-drano. Tsy mila fonosana tantera-drano ianao. Izy io koa dia manana fananana tantera-drano tsara. Azo ampiharina amin'ny faritra mando sy rindrina ivelany izy io ary mora ny manadio, mitafy ary manohitra ny savony, tsy misosasosy ary tsy misy savony miaraka amin'ny fananana avo lenta kokoa. Tsy tantera-drano amin'ny alàlan'ny rano mandalo izy io, noho izany dia azo ampiasaina amin'ny faritra mando ao amin'ny efitrano fandroana, lakozia izy io.
2, faharetana tsara, fanoherana akanjo tsara, fametahana fatratra
Microcement dia manana tanjaka lehibe tokoa. Ny fanoherana ny abrasion sy ny fanoherana ny famatrarana dia lavitra ny latabatra simenitra sy simenitra nentim-paharazana eny an-tsena.
3, Anti-slip, ary seamless ambonin'ny. Mety amin'ny faritra lehibe sy fananganana haingana izy io.
Microcement dia manana ny avo indrindra amin'ny fampisehoana anti-slip any Eropa. Izy io koa dia manana faritra tsy misy fangarony, izay manatsara ny fahamendrehana amin'ny famolavolana. Satria manify dia ambany ny hatevin'ny velaran'ny microcement. Rehefa mihetsika amin'ny tany ianao dia 3mm fotsiny ny hatevin'ny gorodona microcement. Ary rehefa vita amin'ny rindrina dia mety ho eo anelanelan'ny 0.5 sy 1 mm ny hateviny. Izy io dia afaka manao endrika tsara tarehy tsy misy seam, mitohy amin'ny fotoana iray, ary raha misy endrika manokana dia azo atao tsara.
4, tsara tarehy, manatsara ny tsiro sy ny hakanton'ny habakabaka
Ny firafitry ny microcement dia tena tsara. Satria ny fanamboarana simenitra bitika dia vita amin'ny tànana fotsiny, ny vokatry ny simenitra bitika hita amin'ny lafiny samihafa sy eo ambanin'ny vokatry ny jiro samihafa dia samy hafa aorian'ny fahavitan'ny ankapobeny. Izany dia hanome anao tsy ampoizina maro.
Fampisehoana loko microcement.
Microcement dia manana fonosana manokana hahazoana antoka fa tsy hanana ny plastika hita taratra mahazatra amin'ny vokatra etona hafa ny tany, ka mamorona atmosfera ankapobeny. Azo ampiasaina koa ny volon-koditra mamirapiratra, satin ary matte. Ny firafitry ny etona dia mety ho tsara na granula. Izy io dia azo jerena amin'ny matte, satin, glaze ary famaranana glossy hafa mba hahatratrarana lamosina voajanahary na henjana. Miaraka amin'ny loko isan-karazany dia azonao atao koa ny manamboatra loko isan-karazany ny loko tianao araka ny antsoin'ny loko isan-karazany.
Vokatry ny matte Super.
Vokatry ny hazavana voafintina.
Ahoana ny fananganana simenitra bitika?
Fanomanana fananganana micro-simenitra
1) Ny haavon'ny tany sy ny rindrina dia tokony ho fisaka sy mitovy. Tokony hotehirizina tsara sy madio izy io, tsy misy menaka, menaka ary vovoka. Mihaona amin'ny fenitry ny tanjaka.
2) Eo ambonin'ny tile na mosaic dia misy putty matihanina misy singa roa ampiasaina hamitana ny rindrina.
Dingana fananganana micro-simenitra
Fampandehanana sy fanasana lamba → fanodinana primer → fametahana harato → fanosehana simenitra micro → fanesorana ny simenitra faha-2 → famitana sanding → fanaronana loko hosodoko
Sanding sy savaky
Simenitra mikraoba (indroa, miaraka amina sisiny iray)
Sanding maranitra sy sanding tsara (indroa)
Loko fiarovana amin'ny fonony
III. Ny fananganana rindrina simenitra bitika
Rehefa avy maina ny sary hosodoko dia hosorana maina amin'ny rindrina. Izy io dia mety ho batch 2-3 isaky ny ilaina. Ny sosona firakotra tsirairay dia tokony hosarahana 1-2 ora. Aorian'ny maina tanteraka ny fonosana dia fasika misy ravin-taratasy 100 grit aloha. Aorian'izany, fasika miaraka amina taratasy 300-grit mandra-pahatanteraky ny vokatra tadiavina.
*** Aorian'ny fantsom-panafody rindrina BSP600 mpiaro manokana amin'ny rindrina. (Azo afangaro amin'ny rano 5-10% ary hosodoko iray na roa). Dosis isaky ny palitao: 0.8-1kg / m2. Fatra tanteraka: 1.5-2.5kg / m2.
VI. Ny fananganana tany simenitra bitika
Aorian'ny fandokoana ny primer mba ho maina, esory amin'ny tany mitovy ireo akora mifangaro. Mety ho batch 2-3 in-droa araka ny filàna. Ny sosona tsirairay amin'ny elanelam-potoana 1-2 isan-karazany. Aorian'ny maina tanteraka ny firakotra dia ampiasao milina fanamoriana ho fasika voalohany miaraka amina taratasy grit 100. Aorian'izay, fasika misy taratasy grit 300 mandra-pahatanteraky ny vokatra tadiavina. Fantaro ny mpiaro ny gorodona arakaraka ny filany (tsy misy fanalefahana rano, mandoko roa ka hatramin'ny intelo).
Isa isaky ny palitao: 1-1.2 kg / m2. Fatra tanteraka: 2-2.5 kg / m2. Ho an'ny fampiharana amin'ny gorodona: ny gorodona ampiasain'ny mpandeha an-tongotra ihany no mihatra. Toy ny foibe fiantsenana, faritra fisakafoanana, birao sns.
Araka ny hitanao dia somary sarotra ny fizotra etsy ambony.
Ka karazana mpivarotra inona no mila hitanao mba hanaovana an'io dingana io? Raha ny marina dia tsara kokoa ny mitady hosodoko hanaovana azy fa tsy mpanao simenitra. Satria simenitra ny asa ataon'ny simenitra, ny micro-simenitra kosa dia karazana asa tsara. Mety kokoa ho an'ireo mpanao hosodoko manam-paharetana hanao asa tsara izy ireo.
1 、 Ny rindrina dia azo atao miaraka amin'ny putty tsy mahazaka rano miorina amin'ny simenitra ho toy ny fotony. Ny gorodona dia azo atao amin'ny alàlan'ny fanitsiana tena simenitra.
2, beton vao nidina tsy maintsy tazomina farafaharatsiny 28-30 andro.
Ohatrinona ny simenitra micro?
Ny vidin'ny rindrin'ny microcement any Shina dia manodidina ny 100-300 RMB isaky ny metatra toradroa. Ny vidin'ny gorodona dia ho avo kokoa. Raha ampitahaina amin'ny rindrina dia mitaky fanamboarana bebe kokoa ny gorodona. Voasintona ny microrocement ary matetika nopetaham-pasika mba hahazoana antoka fa mahazaka fanoherana.
Ho an'ny microcement hafarana, ny vidiny dia manomboka amin'ny 600 RMB isaky ny metatra toradroa.
MONTO 丨 Spanish Mundo Microcement
TOPCIMENT 丨 simenitra micro Monto Espaniôla
M & B | Italiana Doko kanto haingon-trano
CimentArt zavakanto microcement
DECO CIRÉ | Microcement nafarana grika
Fufini Wall microcement series / Wall microcement
Previous :: Inona no atao hoe Rock Panel? Next: 172 Kresy Bookers Villa famandrihana, ny fandikana ny lohan'ny hazo sy fotsy | Yunxing Design
2021 / 08 / 15 6320